Maxay yihiin donuts barafka iyo sidee loo sameeyaa? | Saadaasha Shabakadda
Dhacdooyinka saadaasha hawada
Maxay yihiin donuts barafka iyo sidee loo sameeyaa?
Monica Sanchez | | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Sawir - elzo-meridianos.blogspot.com.es
Haddii aad ka mid tahay kuwa ku raaxeysanaya socodka ama ciyaaraha isboortiga ee buuraha barafka, waxaa laga yaabaa inaad nasiib u yeelatay inaad aragto donuts baraf. Aniguna waxaan u leeyahay laga yaabee inay tahay dhacdo aad u yaab badan oo saadaasha hawada, oo ku dhacda keliya xaalado gaar ah.
Qaarkood waxaa la ogaaday in, ka sokow dhif iyo naadir, ay gaareen dhexroor aad u weyn: ilaa 70 sentimitir Laakiin, Sidee u samaysan yihiin?
1 Maxay yihiin rollers baraf ama donuts?
2 Sidee u samaysan yihiin?
3 Baraf Donuts Video
Maxay yihiin rollers baraf ama donuts?
Markii aan aadno buur ama dhul baraf leh, waxay u badan tahay inaan waqti yar ku qaadanno sameynta kubbadda barafka. Gaar ahaan kuwooda yaryari waxay jecel yihiin inay la ciyaaraan, iyaga oo u tuura dadka waaweyn si ay ugu raaxaystaan. Waa hagaag, donuts barafka iyagu asal ahaan waa rollers, badanaa banaan, oo si dabiici ah loo sameeyay habka aan hoos ku sheegi doono.
Iyagu waa kuwo la yaab leh oo xiiso leh oo ay fududahay in lala yaabo in la arko mid. Haddii waligood la arko, fursadda lagu sawirayo lama seegi karo 😉.
Sidee u samaysan yihiin?
Si ay u samaysan karaan shuruudahaas waa in la buuxiyo:
Heerkulku waa inuu ahaadaa qiyaas baraf.
Barafku waa inuu si fudud isugu soo ururaa.
Dabayluhu waa inay si xoog leh u duulayaan.
Iyo, marka lagu daro, dhulku waa inuu leeyahay jiirad gaar ah.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira sawirro badan oo ka mid ah ifafaalooyinkan lagu sameeyay Waqooyiga Ameerika ee internetka, laakiin dhab ahaantii waxaa lagu arki karaa meel kasta oo ay la socdaan xaaladaha la soo sheegay, waxay noqon kartaa saldhigga qaar ka mid ah donuts xiisaha leh.
Baraf Donuts Video
Ugu dambeyntiina, maadaama aynaan ogeyn goorta iyo halka ay ifafaalahan dib-u-sameysmi doonaan, waxaan kuu daayaa muuqaal fiidiyoow ah si, ugu yaraan, aad u aragto iyaga oo aad ugu dhowaan karto inaad halkaas joogto. Ku raaxayso
Weligaa ma maqashay dhacdadan saadaasha hawada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Maxay yihiin donuts barafka iyo sidee loo sameeyaa?
Muuqaalka qarsoodiga ah ee 'Brocken spectrum', oo ah ifafaale indhaha la yaab leh
Saddex kayn oo Isbaanish ah ayaa noqon doona sheybaar dabiici ah
Ku hel dhammaan wararka ku saabsan saadaasha hawada emaylkaaga.
Samaynta iyo daraasadaha